Otu esi aghọta ma ọ bụrụ na mmadụ na-enyo anyị anya site na igwe okwu (PC na smartphone) 🥇 Emulator.online ▷ 🥇
Ezigbo ihe nzuzo abụrụla ihe siri ike inweta, ọkachasị mgbe anyị nọ n ’igwe elektrọnik nke nwere ike ijide oge ọ bụla ihe niile anyị na-ekwu ma ọ bụ ụda nke gburugburu ebe anyị bi ma ọ bụ ọrụ anyị na-ewepụta. Ọ bụrụ na anyị na-echegbu onwe anyị banyere nzuzo anyị ma achọghị ka anụ ma ọ bụ ledoo anyị site na igwe okwu nke PC ma ọ bụ ama anyị, na ntuziaka a anyị ga-egosi gị otu esi amata ma ọ bụrụ na mmadụ na-enyocha anyị site na igwe okwu, na-eme nyocha niile dị mkpa na Windows 10 PC anyị, na Macs ma ọ bụ MacBooks anyị, na ama gam akporo ama anyị ma ọ bụ mbadamba na iPhones / iPads.
Ná ngwụsị nke ego Anyị ga-ahụ na anyị enweghị ngwa ọ bụla "nledo" ma ọ bụ ngwa nke na-eji ikikere ịnweta ikike na-enweghị nkwenye anyị. (ma ọ bụ ikekwe ha nwetara nkwenye anyị mgbe anyị na-eme ọsọ ọsọ, na-eji ohere anyị na-eme ihe).
G ALKWUO: Chebe igwefoto PC gị na igwe okwu PC gị iji zere ịbụ ndị nledo
Etu esi enyocha ojiji ojiji igwe okwu
Kọmputa niile nke oge a na ngwaọrụ elektrọnik na-enye nhọrọ iji chọpụta ma ọ bụrụ na mmadụ na-enyo anyị anya site na igwe okwu: n'ọnọdụ nke ugbu a, ọ na-esiri ike iledo igwe okwu na-enweghị obere ọrụ onye ọrụ (onye ga-etinye ngwa ma ọ bụ pịa na njikọ a kapịrị ọnụ iji malite nyocha) ma ọ bụ na-enweghị usoro ntinye aka dị oke elu (ọ dị mkpa iji zere njikwa ndị arụmọrụ na-arụ). Ihe a niile dị irè ruo mgbe anyị ga-ekwu maka ya izipu ozi gburugburu ebe obibiN’okwu ndị a, ụzọ ị ga-esi ledoo ndị mmadụ dịgasị iche iche, ndị uwe ojii na-ejikwa ya site n’usoro nke ụlọ ikpe wee ledoo ndị enyo enyo.
Esi lelee igwe okwu na Windows 10
Na Windows 10 anyị nwere ike ijikwa ngwa na mmemme nwere ike ịnweta igwe okwu igwefoto ma ọ bụ (na igwe okwu ndị ọzọ ejikọrọ) site na imeghe menu mmalite na ala aka ekpe, na ịpị Nhazina ịpị na menu Idoja na imeghe menu Igwe okwu.
Gagharị na windo anyị nwere ike ịhụ ikikere nnweta na igwe okwu maka ngwa ebudatara na Storelọ Ahịa Microsoft na maka mmemme ọdịnala; N'okwu nke mbụ, anyị nwere ike ịkwụsị ịnweta igwe okwu naanị site na ịkwụsị bọtịnụ na-esote aha nke ngwa ahụ, ebe ọ bụ na mmemme ọdịnala anyị ga-emepe mmemme ahụ n'onwe ya ma gbanwee nhazi ahụ metụtara igwe okwu. Ọ bụrụ na anyị chọrọ nweta kacha nzuzo ma hapụ ohere maka igwe okwu naanị maka ngwa "nchekwa", anyị na-atụ aro ka ị gbanyụọ mgba ọkụ na-esote ngwa ngwa na iwepụ enyo mmemme ma ọ bụ onye anyị na-amaghị ebe o si. Iji mie emie akụkụ a, anyị nwere ike ịgụ ntuziaka anyị Etu esi ewepu mmemme na aka n’enweghị akara ma ọ bụ njehie (Windows).
G ALKWUO: Nledo na PC ma hụ otu ndị ọzọ si eji ya
Esi lelee igwe okwu na Mac
Ọbụna na sistemụ arụmọrụ nke Mac na MacBooks, ya bụ, macOS, anyị nwere ike ịlele ma ọ bụrụ na mmadụ na-enyocha anyị site na igwe okwu kpọmkwem site na ntọala. Iji gaa n'ihu anyị gbanye Mac anyị, anyị pịa akara ngosi nke Apple bitten n'akụkụ aka ekpe nke elu, anyị na-emepe menu Mmasị sistemụpịa akara ngosi Nche na nzuzo, họrọ taabụ Idoja n'ikpeazụ ka anyị gaa na menu Igwe okwu.
Na windo anyị ga-ahụ ngwa na mmemme niile rịọrọ maka ịnweta igwe okwu. Ọ bụrụ na anyị achọpụta mmemme ma ọ bụ ngwa nke anyị amaghị mmalite ya ma ọ bụ nke na-ekwesịghị ịdị ebe ahụ, anyị nwere ike wepu akara nlele na-esote aha ya na, ozugbo amata, anyị nwekwara ike ịga n'ihu iwepụ ya site na ịmepe ngwa ahụ. Onye Nchoputasite na ịpị menu Aplicaciones n'aka ekpe, ịchọta ngwa nledo na, na ịpị aka nri ya, gaa n'ihu kagbuo site na ịpị Bugharịa na ahịhịa.
Esi lelee igwe okwu na gam akporo
Gam akporo smartphones na mbadamba agbasaghị na-ndị kacha ngwaọrụ ka ndị nledo na kemgbe sistemụ abụghị mgbe niile ka ọ dị ọhụrụ Na, nyere ya nile, ọ bụghị onye ọ bụla nke ọma na-enyocha ma arụnyere ngwa ọdịnala na-nnyocha na igwe okwu. Iji lelee ngwa ndị nwere ikike iji nweta igwe okwu nke ngwaọrụ anyị, mepee ngwa ahụ Nhazika anyị gaa na menu Nzuzo -> Njikwa ikike ma ọ bụ na menu Nche -> Ikike na n'ikpeazụ pịa na menu Igwe okwu.
Ihuenyo nke na-emepe, anyị ga-ahụ ngwa niile rịọrọ ka ha banye igweokwu ma ọ bụ ndị nwere ikike mana ha erubeghị "uru". Ọ bụrụ na anyị achọpụta ngwa ọ bụla dị iche ma ọ bụ na anyị echetaghị ịwụnye ya, anyị na-aga n'ihu site na iwepu ntinye okwu igwe okwu (pịa bọtịnụ dị n'akụkụ aha nke ngwa ahụ) wee wepu ngwa ahụ na-enyo enyo ozugbo, iji zere mmemme ndị ọzọ. Na nke a, anyị nwere ike ịgụ akwụkwọ ndu anyị Iwepụ ngwa ọdịnala na gam akporo kpamkpam, ọbụlagodi otu oge.
Ọ bụrụ na anyị chọrọ ịnweta ozi ọhụụ nke ngwa ndị na-enweta igwe okwu, ọbụlagodi mgbe anyị anaghị eji ngwa ndị na-eji igwe okwu eme ihe n'ụzọ doro anya, anyị na-atụ aro ka ị wụnye ngwa Access Dots n'efu, nke na-enye obere ntụpọ na-enwu gbaa n'akụkụ aka nri elu. mgbe obula ngwa ma obu ihe omume na enweta igwefoto na igwefoto.
G ALKWUO: Lelee / nledo na ekwentị onye ọzọ (Android)
Esi lelee igwe okwu na iPhone / iPad
On iPhone na iPad, na mbata nke iOS 14, a gbakwunyere nzaghachi na nnweta na igwefoto ma ọ bụ igwe okwu: n'ọnọdụ ndị a, obere oroma, ọbara ọbara ma ọ bụ ntụpọ na-acha akwụkwọ ndụ ga-apụta n'elu aka nri, yabụ ị nwere ike ịmata ozugbo ma ọ bụrụ na mmadụ na-enyocha anyị site na igwe okwu.
Na mgbakwunye na nyocha a ozugbo, anyị nwere ike ijikwa ngwa ndị na-enweta igwe okwu na ngwaọrụ Apple mgbe niile site na imeghe ngwa ahụ. Nhazi, site na ịpị na menu Idoja, na iji nlezianya na-enyocha ngwa nke na-enweta igwe okwu, na-egbochi ndị anyị na-amaghị ma ọ bụ na anyị etinyebeghị. Iji budata dịkwuo nzuzo mgbe ị na-eji iPhone, anyị na-akpọ gị ka ị gụọ ntuziaka Nzuzo nzuzo na iPhone ga-arụ ọrụ maka nchebe.
G ALKWUO: Olee ka ndị nledo na iPhone
Nnyocha na igwe okwu bụ otu n’ime ebumnuche ndị na-eme mpụ, ndị nledo ma ọ bụ ndị nchọpụta, n’ihi nke a, sistemu eji arụ ọrụ abiala nke ọma mgbe a bịara n’inye ikike a. Ọ dị mma mgbe niile ịkpọtụrụ menu na ngwa ndị a hụrụ n'elu, ịmara mgbe niile ma ọ bụrụ na mmadụ na-enyocha anyị site na igwe okwu, ikekwe na-ejide ozi nkeonwe ma ọ bụ ihe nzuzo ụlọ ọrụ.
Ọ bụrụ na anyị na-atụ egwu ịnweta ngwa nledo na ekwentị, anyị na-achọ ọnụnọ nke ngwa ọ bụla a hụrụ na ntuziaka anyị. Ngwa kacha mma iji ledoo na ekwentị mkpanaaka (Android na iPhone) mi Nzuzo gị n'ụlọnga ngwa maka gam akporo ka ndị nledo, track ọnọdụ, ozi na ndị ọzọ.
Ọ bụrụ na, n'ụzọ dị iche, anyị na-atụ egwu na nnyocha nke microphones na-arụ site na nje virus gam akporo, anyị na-atụ aro ka ị gụọ isiokwu ahụ Chọpụta ma wepu spyware ma ọ bụ malware na gam akporo.